Fanehoan-kevitra : miantso vahoaka handray fahefana ny FFP | NewsMada
Fanehoan-kevitra : miantso vahoaka handray fahefana ny FFP
Mahazo laka ny fitsikerana sy ny fanakianana izao fitondrana izao. Anisan’ny nitondra ny heviny ny faran’ny herinandro teo teny Ivato, ny avy amin’ny Firaisankina ho fanavotam-pirenena. Nitodika amin’ny vahoaka izy ireo.
« Aoka izay fa mila miara-mientana hanavotana firenena isika… Miantso ny vahoaka izahay handray ny fahefana. Tompon’ny fahefana isika ka hanangana fitantanana ho an’ny fanorenana ifotony », hoy ny anisan’ny mpitarika, Manantsoa Victor. Nohitsin’izy ireo fa ampy izay ary tonga ny fotoana handraisana fanapahan-kevitra manoloana izao raharaham-pirenena izao. « Tsy azo ekena intsony ny gaboraraka sy ny kolikoly manjaka eto amin’ny firenena ankehitriny izao. Mariky ny tsy fahafehezana ny toekarem-pirenena izany », hoy izy ireo. Nohitsiny fa tsy hahaleo tena mihitsy isika raha tsy mahafehy ny toekarentsika ary tsy misy hatramin’izao andininy na andalana iray aza mikasika politikan’ny toekarem-pirenentsika.
Maro ireo tsy mankasitraka izao fitondrana izao intsony
Nanao antso avo ireo vahoaka tsy an-kanavaka mba tsy hipetrapetra-poana manoloana ny zava-misy moa ity vovonana ity ary nanambara fa mbola hitohy ny hetsika. « Efa tafatsangana amin’ireo boriborintany enina eto an-dRenivohitra ny vovonana ho amin’ny fametrahana ny fitantanana hanorenana ifotony ny firenena izao », hoy ihany izy ireo.
Midika izany fa efa maromaro ireo tsy mankasitraka intsony izao fitondrana HVM izao raha miainga amin’ny fanehoan-kevitra samihafa tato ho ato. Na izany aza, tsy mbola hita taratra ny fampitambaran-kery eo anivon’ireo maneho hevitra mitsikera sy manakiana izao fitondrana izao. Andrasana ny ho tohiny.